Tetikasa mangatsiaka kokoa amin'ny Farm Air
Anisan'ireo fitaovana fampangatsiahana zavamaniry, misy maridrefy marobe sy maodelin'ny cooler etona etona, modely sy tsipiriany samihafa, fahombiazan'ny vidiny eo amin'ny tsenan'ny varotra, sy fampiharana maro karazana. Izy io dia fitaovana fampangatsiahana zavamaniry misy fisafidianana avo lenta.
Amin'ny maha orinasa marika taloha manana traikefa eo amin'ny sehatry ny indostria 13 taona, ny Xikoo evaporative Air Cooler dia voasokajy ao anaty rivotra mangatsiaka ao amin'ny fitaovana fampangatsiahana ao amin'ilay orinasa:
①Fangatsiahana rivotra mangatsiaka mikoriana: mety amin'ny tranokala misy herinaratra miasa antonony sy mikoriana lehibe.
②Fangatsiatsiahana entona miompana amin'ny rivotra: mety amin'ny tranokala misy habetsahan'ny rivotra faran'izay kely ary tsindry miasa kokoa;
③Tsy misy môtô mahery fanala fanalefahana môtô: ny ravina miendrika tsipika tsy manam-paharoa dia entin'ny fahasamihafana amin'ny tsindry entona ivelany, izay mihodina miaraka amin'ny pivot, ary avy eo mamoaka ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fitaovana entona voajanahary entin'ny rivotra izay manana kalitaon'ny rivotra anatiny tsara.
Ireo hevi-dehibe momba ny fametrahana rivotra mangatsiaka kokoa Xikoo:
①Natao apetaka ny velarana hisorohana ny fivoahan'ny rano;
②Ny fametrahana ny rivotra mangatsiaka dia tsy maintsy avo kokoa noho ny tafo fisaka, ary ny visy vatofantsika dia tsy maintsy apetraka mialoha, ary ny visy vatofantsika dia tokony hasiana mpanasa lohataona mba hialana amin'ny famotsorana mandritra ny fampiharana;
③Ny savaivain'ny fantsom-pivoahana amin'ny rivotra dia tsy azo ahena, fa nitombo ihany. Tsy maintsy apetraka ny harato alokaloka, ary tokony hatsangana ny tadin-drivotra sy ny orana rehefa mavesatra ny rivotra;
④Nisy sosona pad fingotra milimetatra atsangana eo anelanelan'ny fototr'ilay rivotra mangatsiaka sy ny fotony hampihenana ny hovitrovitra;
⑤Ny cooler etona etona etona an'ny orinasa Xikoo dia mifandray amin'ny fantson-drivotra mampiasa fantsom-bary malefaka (akora malemy ary tsy hodorana), ny halavany dia tsy tokony ho latsaky ny 200mm, ary ny savaivon'ny fantsom-batana dia mitovy amin'ny fampidirana sy ny fanondranana entana voafaritry ny rivotra mangatsiaka amin'ny tafo. Mba hahazoana antoka fa toa tsy voavily ny fantsona mandritra ny fizotran'ny fizotran'ny rindrambaiko rafitra dia tokony hapetraka tsara. Ho an'ny fantsom-panafody fotsy napetraka eo amin'ny faran'ny suction ny cooler etona etona Xikoo dia azo apetraka somary teritery kokoa mba hisorohana ny cooler etona etona Xikoo tsy hoentina mandritra ny fiasana ary hampihena ny famaritana ny fantson'ny lamba fotsy.
Torolàlana manokana momba ny rivotra mangatsiaka ho an'ny indostria Xikoo:
Teny fampidirana: Ao anatin'ny toe-javatra mahazatra, ny cooler etona Xikoo dia manana toetr'andro marobe rehefa miasa amin'ny hafanan'ny efitrano izy ireo, saingy ao anatin'ny elanelam-potoana rehetra izy rehetra. Izy io dia satria mifampikasoka ny ampahany amin'ireo fitaovana, ka miteraka famokarana hafanana sy hafanan'ny akorany. Saingy tsy voatery hidika izany hoe avo loatra ny mari-pana.
Ny rivotra miompana dia mangatsiaka kokoa ny mari-pana amin'ny firaketana ny fitaovana fampangatsiahana zavamaniry mihoatra ny isa mahazatra. Ireto ny antony lehibe:
① Tsindry miasa ambany amin'ny famatsiana herinaratra;
②Ny motera dia mivoaka amin'ny dingana fanaovana fanatanjahan-tena na tsy mandeha ny tariby;
③Rava ny fitondra mihodina ny motera ary kely ny fahazoana miasa amin'ny fiaraha-miasa, izay tsy mahafeno ny fepetra takiana;
④Ny fanoherana ny rindrambaiko rafitra dia lehibe loatra na ny rivotra mangatsiaka dia napetraka tsy ara-tsiansa ary be loatra ny motera. Ny antony dia ny coefficient fanoherana ny tamba-jotra fantsona dia lehibe loatra na ny valizy vavahady fantsona fantsona tsy vohana.
Fotoana fandefasana: Nov-12-2020